Ny ankamaroan'ny olona na ho ela na ho haingana, fa hamorona fianakaviana. Amin'ny voalohany, ny fiainam-pianakaviana dia tahaka ny endrik'olona iray, ny fifankatiavana dia mahatsapa fifaliana sy fitiavana tsy azo ihodivirana. Saingy ny tontolo maoderina nandritra ny taon-dasa dia nanova ny toe-javatra iombonana izay nisy toetoetry ny fianakaviana tanora teo aloha. Ny olan'ny fianakaviana tanora dia mamorona karazana fianakaviana vaovao. Any amin'ny fianakaviana toy izany dia miankina amin'ny fifankahazoan-kevitra, ny fifandraisana, ny fanoloran-tena ary ny fifandraisana manokana amin'ny fianakaviany ny maha-tokana azy.
Ny olan'ny fianakaviana tanora ankehitriny dia andraikitra maika amin'ny fianarana sy ny fahatakarana ny antony ara-psikolojika amin'ireo olana ireo. Andao hodinihintsika amin'ny antsipiriany bebe kokoa ireo olana lehibe amin'ny fianakaviana tanora ary hiezaka ny hahatakatra ny fomba hiatrehana ireo olana ao amin'ny fianakaviana.
Ny olana lehibe amin'ny fianakaviana tanora
Ao anatin'ny zava-misy maoderina dia samy hafa ny olana atrehin'ny mpivady. Ny loharanon'izy ireo dia voalohany indrindra, ny tsy fisian'ny fanohanana ny fanjakana teo aloha, ary ny fiarovana ara sosialy amin'ny fianakaviana tanora.
Tsara ny manamarika fa ny manam-pahaizana dia milaza fa ao amin'ny firenena CIS no olana lehibe indrindra amin'ny fianakaviana tanora dia ao anatin'ny efatra:
Tsy ampy ny fiantohana ara-bola sy ara-bola ampy ho an'ny fianakaviana tanora. Noho izany, ny fidiram-bolan'ny mpivady vao haingana dia avo roa heny noho ny amin'ny ankapobeny ao amin'ny fanjakana.
Ny olana ara-tsosialy amin'ny fianakaviana tanora dia ahitana ny filàna ara-bola sy ara-materialy izay mifandraika amin'ny filàna ny fandaminana ny fiainam-pianakaviana, ny fividianana ny sehatry ny fiainany manokana, sns.
Ny fe-potoam-piarahamiasa ny fiarahan'ny mpivady (fampianarana, toeram-piasana).
Adihevitra ara-psikolojika amin'ny fianakaviana tanora. Noho izany, 18% -n'ny fianakaviana dia mila torohevitra ara-tsaina amin'ny manam-pahaizana.
Mifandraika amin'ny toe-javatra misy ankehitriny eo amin'ny fampandrosoana ny fiaraha-monina, dia misy olana lehibe roa momba ny olana ara-pianakaviana: socio-psycholojika sy sosialy-ekonomika. Izy ireo dia voasarika ho amin'ny olana lehibe marobe:
Loza mifototra amin'ny trano. Afaka miteny amim-pahatokisana isika fa ity olana ity dia iray amin'ireo olana lehibe indrindra ho an'ny mpivady tanora. Raha ny marina, ny fiarahamonina maoderina dia tsy manana fahafahana hahazo trano maimaim-poana, toy ny teo aloha. Ary amin'ny tsena malalaka ho an'ny fianakaviana tanora tsotra dia sarotra ny mividy trano avy hatrany. Vitsivitsy ihany no manana efitra fisokafana. Amin'izany lafiny izany, ireo fianakaviana tanora dia misafidy iray amin'ny safidy ho an'ny fiainana: trano fonenana manokana, trano fonenana na fianakaviana.
Olana sy olana ao an-tokantrano. Ny fianakaviana tanora tsirairay dia miatrika olana ara-nofo, fahasarotana amin'ny tsy fahampian'ny neobustroennostyu. Rehefa manampy an'io olana io ny ray aman-drenin'ny mpivady dia afaka manampy. Ny fahitan'izy ireo ny fahitana, ity olana ity dia hanokatra rivotra faharoa ho an'ny fianakaviana tanora.
Employment. Karama ambany sy fidiram-bola, tsy fahampiana ara-materialy ankapobeny - olana lehibe iray lehibe amin'ny fianakaviana tanora izany. Na izany aza, ny tsy fahafaham-po amin'ny vola miditra dia manery mpivady tanora mitady asa any an-tanàna hafa, ary tsy misy fepetra ny safidy ho any amin'ny firenen-kafa.
Olana ara-pitsaboana. Naseho fa ireo vehivavy tsy manambady dia mijaly noho ny aretina mitaiza noho ny mariazy. Ny fiantraikan'ireny olana ara-pahasalamana ireny dia voakasika mafy amin'ny tsy fisian'ny fanohanana ny lahy, ny fanohanana, ny fahasembanana eo amin'ny fianakaviana. Midika izany fa ny fiarovana ny fahasalaman'ny tanora ao amin'ny taovam-pananahany dia tokony ho amin'ny ambaratonga mifanaraka amin'izany. Raha ny marina dia miankina amin'izany ny fahombiazan'ny andraikitra amin'ny fananahana.
Olana ara-tsaina amin'ny tanora. Ny fanorenana fianakaviana tanora ao amin'ny fiaraha-monina maoderina dia tsy misy fototra iorenan'ny fampianarana, lalàna na ny siansa. Amin'ny voalohany, ny fiainam-pianakavian'ireo mpivady dia ny famolavolana stereotype momba ny fifandraisana, ny fananganana ny rafitra fanaraha-mason'ny namana. Ny mpiara-miasa dia tsy mitady fomba hitadiavana karazana fifandraisana izay ho afaka hanome fahafaham-po ny roa tonta.
Noho izany, ny olan'ny fianakaviana tanora dia olana amin'ny fananganana ny mpiara-miasa tsirairay amin'ny maha-olona azy. Ny fampifanarahana amin'ny toetry ny olon-dehibe.
Taratasy ho an'ny lehilahy malala
Psychology ny fitiavana sy fifandraisana
Ahoana ny famongorana lehilahy?
Ahoana no hisarika ny saina amin'ny tenanao?
Ahoana ny fomba fitondrantena amin'ny lehilahy?
Vehivavy manambady sy manambady - psychologie ny fifandraisana
Fifandraisana iraisan'ny lehilahy sy ny vehivavy
Ahoana ny fomba hanakanana ny famolavolana azy eo anoloan'ny lehilahy?
Ahoana ny fahatakarana fa fitiavana izany?
Ahoana ny fomba fitondrana lehilahy iray adala?
Ny erectronisan'ny uterus cervix
Ny alika dia nandà ny tongony
Spinner - inona ary izany ary ahoana no fomba handrafetana trano fonenana?
Ny cyst follicular amin'ny ovaire havia
Cookie maharitra maharitra
Melania Trump dia nandresy ny The Daily Mail, nametraka $ 3 tapitrisa
Hazo fanondrahana fandevenana
Inona io akanjo mafana io no mafana indrindra?
Ny fahakelezan'ny ala
Herisetra eo amin'ny handrina sy ny maso - mety amin'ny antony sy ny fitsaboana mahomby
Famerenana ny dacha amin'ny tanany - hevitra mahaliana
Nipoitra tao amin'ny tranom-bakoka Madame Tussauds i Tom Hardy
Clips ho an'ny kitapo sy scarves